एकल महिला ः झन् हिंसाको शिकार | चितवन पोष्ट दैनिक
एकल महिला ः झन् हिंसाको शिकार
२०७० मंसिर ५, बुधबार ०४:०६ गते
फलफूलसहितको भाँडो टाउकोमा राखेर बेच्दै हिँड्नु मञ्जुमाया आचार्यको दैनिकी हो । त्यससँगै समाजको दैनिकी बनेको छ, उनीबारे टीकाटिप्पणी गर्नु । १० वर्षे जनयुद्धकालमा श्रीमान् गुमाएको पीडासँगै टुहुरा छोराछोरीको स्याहार र बाँच्नका लागि फलफूल बेच्ने काम थालेकी आचार्य आत्मनिर्भर छिन् । छोराछोरीलाई राम्रोसँग पढाएकी छन्, पारिवारिक रुपमा सुखी भए पनि सामाजिक दृष्टिकोणबाट अझै खुशी हुन सकेकी छैनन् ।
‘दिनभरि १५ किलोभन्दा बढी फलफूल बोकेर सिन्धुलीबजार घुम्छु, टाउको फतक्क गल्छ, दुःख गरी खाएकी छु’, उनले भनिन् । दिनभर फलफूल बेचेर थकित हुँदै घर फर्कंदा वरपरकाहरुले ‘कसलाई खुसी पारेर फलफूल बेचेर आई, राम्रै पैसा कमाएकी छे’ भन्नेजस्ता अपमानित बोली आफूले सुन्नेगरी नै भनेको सुन्दा उनलाई निकै नराम्रो र अपमानित महसुस हुन्छ । समाजले दिनहँुजसो उनीमाथि लगाउने आरोप सुनाउँदै गर्दा गहभरि आँशु जमाएकी आचार्यको पीडा साँच्चै मर्मस्पर्शी छन् ।
तारा देवकोटा एकल महिला समूह सिन्धुलीकी अध्यक्ष हुन् । सामाजिक क्षेत्रको क्रियाशीलतासँगै एकल महिलाहरुको हकअधिकारको लागि लडिरहेकी उनी आफैँ समाजमा विस्थापित भइने हो कि भन्ने चिन्तामा छिन् । सशस्त्र युद्धकालमै श्रीमान् गुमाएकी देवकोटाले एकल महिलाको हितका लागि काम थालेको वर्षाैं भयो । तर, सामाजिक कारणले नै स्वतन्त्र भएर एकल महिलाको हितका लागि काम गर्न नसकेको अनुभब छ, देवकोटाको । एकल महिलाको अधिकारका लागि काम गरिरहँदा एकल महिलाहरुको परिवारले आफ्नो छोरी–बुहारी बिगारेको, एकल महिलालाई कार्यक्रममा सहभागी गराउँदा अरुको काम गर्ने समयमा भाषण सुनाउन लगेको जस्ता अनेकौँ आरोप खेपिरहकी छिन् उनले । एकल महिलाहरुको क्षेत्रमा देवकोटाको जाँगर त छ नै, यस्तै आरोपहरु खेपिरहने हो भने कामलाई निरन्तरता दिनै नसकिने हो कि भन्ने चिन्ता बढ्दो छ ।
सिन्धुलीकी अर्की एक महिला (नाम गोप्य राखिएको) की श्रीमान् पनि विवाह भएको १ वर्षमै बेपत्ता भए । उनले १९ वर्षको उमेरमा सिन्धुलीमै प्रेमविवाह गरेकी हुन् । ३ जनाको परिवार रहेको उनको घरमा श्रीमान्को मृत्युपछि घरमा ससुरा र उनी मात्रै रहे । तत्कालीन माओवादीमा आबद्ध उनका श्रीमान् बेपत्ता भएको ३ महिनाको पीडा सेलाउन नपाउँदै ससुराले यौन दुव्र्यवहार थाले । बिहान, दिउँसो, बेलुका केही पनि नभनीकन दिनमा १२ पटकभन्दा बढी यौन दुव्र्यवहार हुने गरेको बताउँछिन् उनी ।
“महिनावारीको समयमा पनि सुख पाउँदैनथेँ”, उनले भनिन् । २० वर्षको उमेरकी उनलाई ४७ वर्षीय ससुराले लगातार दुव्र्यवहार गरेपछि बसिनसक्नै भयो । जाऊँ पनि कहाँ ? भागेर विवाह गरेसँगै माइती जाने ढोका बन्द भएको थियो, न त छाडेर जाने कुनै जाने ठाउँ नै थियो । १ वर्षसम्म लगातार उनले ससुराको दुव्र्यवहार सहिरहिन् । समाजले ससुरासँगको यौनसम्बन्धको बारेमा सुइँको पाएपछि उनलाई धारामा पानी लिन जाँदा होस् या मेलापात जाँदा ‘ससुरासँग सल्केकी’ भनेर दिनहँु कुरा काटिरहे । समाज नै उनको विपक्षमा देखिएपछि आफूमाथि भएको दुव्र्यवहारविरूद्ध आवाज उठाउन सकिनन् उनले । हाल काठमाडौँमा मकै बेच्ने काम गरेर बसेकी छिन् ।
यी त जनयुद्धकालमा श्रीमान् गुमाएका एकल महिलाको पीडाका कथाहरु भए । अन्य कारणबाट श्रीमान् गुमाएका सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिका वडा नं. ६ कि राधा कार्कीलाई दिनहँुजसो ‘अलच्छिनी’ को संज्ञा दिइन्छ, जसका कारण खुलेर घरबाटै निस्किनै असजिलो लाग्छ उनलाई । घरमा हुने पूजापाठहरुमा मात्रै हैन, सामाजिक शुभकार्यहरुमा सहभागी हुँदा पनि समाजका अन्य महिलाहरुले साइत बिग्र्यो भनेर नाक खुम्च्याउँछन् । आफ्नै घरमा विभेद गरिएकाले सामाजिक रुपमा पनि उनी अपहेलित भएकी हुन् । आफूमाथि भएको अन्यायको विरूद्ध केही गर्नुपर्ने भन्ने सोच भए पनि नकारात्मक सोच भएका समाजको अगाडि आवाज उठाउन डर लाग्छ कार्कीलाई । बाँचुञ्जेल यस्तै आरोप सहनुबाहेक एकल प्रयासमा त्यस्तो आरोपको प्रतिकार गर्ने क्षमता आफूसँग नरहेको बताउँछिन् उनी । तर अरु कसैले विभेद र अपमानका विरूद्ध आवाज उठाए उनी पनि हात मिलाउन तत्पर छिन् ।
सिन्धुली रतनचुराकी निशा खड्काले विवाह गरेको ३ महिनामै श्रीमान् बिते । घरनजिकै जंगलमा घाँस काट्न जाने क्रममा रुखबाट लडेर श्रीमान्को मृत्यु भएपछि एक्ली भएकी खड्कालाई सहानुभूति त कता हो, छोरा टोकुवा भनेर घरमा सासूले निरन्तर लाञ्छना लगाइन् । त्यसबेला खड्काको १ महिनाको गर्भ थियो । आरोप मात्रै हैन, सासूले दिनभरि मेलापात गएर बेलुका घर फर्कंदा गर्भावस्थामा कुटपिट गर्ने, आगोले पोलिदिने जस्ता पीडा दिन्थिन् । त्यति मात्रै हैन, परिवारबाट मायाममता, पौष्टिकयुक्त खानेकुरा र विशेष हेरचाह पाउनु पर्ने गर्भावस्थामा उनलाई पेटभरि खानसमेत दिइँदैनथ्यो । सधैँजसो आफूमाथि त्यस्तो व्यवहार भएपछि बाध्य भएर उनले घर छाडिन् ।
घर छाडेकी उनले भनिन्– ‘श्रीमान् हुँदा र एक्लो हुनुमा धेरै फरक छ । आखिर श्रीमान् घाँस काट्न जाँदा रुखबाट लडे, यसमा मेरो के दोष ? पीडा त सबैभन्दा बढी मलाई नै थियो नि !’ अहिले उनी दैनिक ज्यालादारीमा निर्माण मजदुर छिन् । बच्चा २ वर्षको भइसक्यो । बच्चालाई धेरै पढाउने सपना छ उनीसँग । एसएलसीसम्मको शिक्षा हासिल गरेकी उनी ३० वर्ष कटेपछि महिलामाथि हुने दुव्र्यवहारविरूद्ध सक्रिय हुने बताउँछिन् । यसरी अधिकांश एकल महिलाहरुलाई समाजमा बाँच्न निकै गाह्रो छ । चाहे उनीहरु शिक्षित र आत्मनिर्भर नै किन नहोऊन् ?
एकल महिला समूह सिन्धुलीले हाल जिल्लामा रहेका एकल महिलाहरुको तथ्याङ्क संकलनको काम गरिरहेको छ । समूहको प्रारम्भिक गणनाअनुसार अहिले जिल्लामा करिब ६ सय जना एकल महिलाहरु छन् । गणनाको काम पूरा नभइसकेकाले यो संख्या बढ्ने समूहले अनुमान गरेको छ । जिल्लामा रहेका अधिकांश एकल महिलाहरु अशिक्षित र बेरोजगार छन् । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महिला निकाय (यूएन वुमन) लगायतका संस्थाहरुको प्रतिवेदनले पनि यसै भन्छ । मानवअधिकारका लागि एकल महिला समूह (डब्ल्यूएचआर) ले गरेको सर्वेक्षणले नेपालमा लगभग ८० हजार एकल महिला छन् ।
द्वन्द्वपीडितका समस्यालाई मध्यनजर गर्दै शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयले द्वन्द्वपीडित राहत तथा आर्थिक सहायता कार्यविधि नियमावली २०६६ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यसअनुसार द्वन्द्वपीडित परिवारलाई तीन लाखसम्म राहत दिने व्यवस्था छ । तर, राहत सहजै उनीहरुको पहँुचभन्दा बाहिरको कुरा हो । एकल महिलाहरुलाई राहत उपलब्ध गराउने समस्या छ ।
एकल महिला समूह सिन्धुलीकी अध्यक्ष देवकोटा भन्छिन्– ‘पहिलो कुरा त एकल महिलाहरुलाई राहत लिने प्रक्रियाका विषयमा जानकारी नै छैन, दोस्रो उनीहरुलाई जानकारी भए पनि राहतका लागि निकायहरुमा धाउने वातावरण छैन ।’
उनको विचारमा राहतलगायतका एकल महिलाले पाउने अन्य सेवासुविधाका बारेमा जानकारी गराउन सरकारले एकल महिलाहरुका लागि चेतनामूलक कार्यक्रम थाल्नुपर्छ । यसरी एकल महिलामाथि हिंसा तथा दुव्र्यवहारका घटनाहरु बढ्नुका कारण उनीहरुले समस्याको ढाकछोप गर्नु नै प्रमुख रहेको महिला अधिकारकर्मी सविता कोइराला बताउँछिन् । एकल महिलाहरु एकबद्ध भएर आफूहरुमाथि हुने हिंसाविरूद्ध लाग्ने हो भने समस्या समाधान हुने अधिकारकर्मीहरुको भनाइ छ ।
(सञ्चारिका फिचर सेवा मध्यमाञ्चल)